Olee otú iyi Video si Mac ka iPad
> Resource> iPad> Stream Video si Mac ka iPad mfe na Kpamkpam
The iPad bụ a obere ngwaọrụ na-ekiri fim na TV na-egosi. Otú ọ dị, iTunes nanị na-ahapụ gị enuba iPad enyi na enyi videos site na ikike Mac ka iPad. Ọ bụrụ na ndị vidiyo ị na enwetatụbeghị na-adịghị iPad akwado formats ma ọ bụ na ha bụ ndị na a dị iche iche Mac nke ị dịghị eji ka mmekọrịta na iPad, nsogbu abịa.
Echegbula. Ebe a na-abịa a mma ngwọta maka gị. Ị pụrụ ime ya site na iji ihe dị mfe na-eji Mac ka iPad transfer ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo (Mac). Ngwá ọrụ a na-enye gị ohere iji strimụ video si Mac ka iPad na efu data ọnwụ. Ọbụna video na echekwara ya na dị iche iche Mac, ngwá ọrụ a na-enyere gị nyefee ya na gị iPad.
Mfe nzọụkwụ na-esi strimụ video si Mac ka iPad
N'okpuru ebe bụ zuru ndu banyere otú enuba video si Mac gị iPad. Lelee ya.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare TunesGo (Mac)
Download na wụnye Wondershare TunesGo (Mac) na gị Mac-agba ọsọ Mac OS X 10,8, 10.7, na 10.6. Na ya n'ụzọ zuru ezu-akwado ndị niile iPad ụdị-agba ọsọ na iOS 5 / iOS 6 / iOS 7. Mgbe ahụ, igba egbe Wondershare TunesGo (Mac)
Dị ka a Windows njirimara, i nwere ike ịgakwuru Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) na-nyefee vidiyo si na Windows na kọmputa na-iPad.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPad ka Mac
Jiri eriri USB jikọọ gị iPad ka Mac. Ngwá ọrụ a ga-chọpụta gị iPad ozugbo na-egosi ya data na-amalite window.
Nzọụkwụ 3. Stream video ka iPad si Mac
Na-ekpe sidebar, pịa Movies ma ọ bụ TV na-egosi na n'aka ekpe. Na management window, pịa "Tinye" na-agagharị na gị Mac ruo mgbe ahụ videos ị chọrọ enuba iPad. Họrọ ha na pịa "Open". Mgbe ahụ ị ga-ahụ na vidio ndị a na-streamed gị iPad.
Ọ bụrụ na videos na ị na-nkwanye gị iPad ka anaghị akwado na iPad, Wondershare TunesGo (Mac) ga-tọghata vidio ndị a ndị na-ahụ na .m4v usoro.
Mgbe nkwanye vidiyo si na Mac ka iPad, ị ga-ahụ ha na gị na iPad. Nke a bụ otú enuba vidiyo si na iMac ka iPad enweghị iTunes. Na ngwá ọrụ a, ị ga-agaghịkwa nchegbu banyere video incompatibility na iPad na faịlụ erasing mbipụta na gị iPad.
Gbalịa TunesGo iji strimụ fim iMac ka iPad!
Best iPad ka Mac Nyefee maka MacBook Pro / MacBook Air / iMac